facebook ပေါ်မှ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ Archives - Tameelay
အားလုံးပဲ သိရှိဆင်ခြင်နိုင်ကြစေရန် ခေါင်းအုံးညစ်ပတ်ခြင်းက လူကို အသက်ဆုံးရှုံးနိုုင်သည် အထိဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိ
February 23, 2022 by daddy
အားလုံးပဲ သိရှိဆင်ခြင်နိုင်ကြစေရန် ခေါင်းအုံးညစ်ပတ်ခြင်းက လူကို အသက်ဆုံးရှုံးနိုုင်သည် အထိဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိ အသက်(36)နှစ် အရွယ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Stewart Arms ဟာ ကိုယ်လက်မအီမသာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေး သမား ဖြစ်တာကြောင့် ခရီးပန်းတာပဲလို့ ယူဆပြီး ပေါ့ပေါ့ဆဆနေခဲ့ပေမယ့် နှစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိ ဒဏ်ရာက မသက်သာလို့ သူ့မှာ အဖျားရောဂါရှိနေပြီထင်ကာ ဆေးခန်းကို သွားပြခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာရဲ့ စစ်ဆေးမှု မှာလည်း တစ်ခြားထူးခြားမှုကို မတွေ့ရလို့ အဖျားကျဆေးကို ပေးပြီးပြန်လွှတ်ခဲ့ပါတယ် သွေးအဖြေကလည်း ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မရှိခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ရက်အကြာမှာပဲ Stewart ဟာ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာ သွေးခဲတွေ ပါလာတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာတော့ရောဂါကို သေသေချာချာ စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ရပြီး ရောဂါရဲ့အဖြေကတော့ “အဆုတ်ကို မှိုစွဲ”တဲ့ ရောဂါ ဖြစ် … Read more
Categories facebook ပေါ်မှ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ
မဆင်မခြင် နေထိုင်မှုပုံစံများကြောင့် တိမ်ကော ယိုယွင်းလာသော ရေချိုကန်ကြီးအင်းလေး
မဆင်မခြင် နေထိုင်မှုပုံစံများကြောင့် တိမ်ကော ယိုယွင်းလာသော ရေချိုကန်ကြီးအင်းလေး အာရှတိုက်အရှေ့ပိုင်းရှိ တရုတ်ပြည် ပိုယန်း ရေချိုအိုင်ကြီး ခမ်းခြောက်သွားပုံကို သီးခြားစာစုများဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ပြီး လက်လှမ်းမှီရာ နိုင်ငံများ ဒေသများရှိ မြစ်ကြီးများ ရေကန်ကြီးများ တဖြေးဖြေး ခမ်းခြောက်လာကြပုံကို အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ကိုလိုရာဒိုမြစ်ကြီး နှင့် မစ္စစ္စပီမြစ်ကြီး အပါအဝင် ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲ ဖောက်ပြန်မှု၏ အကျိုးဆက်များဖြစ်သော မိုးခေါင်ခြင်း ကမ္ဘာကြီးပိုမိုပူနွေးလာခြင်းစသည်တို့အပြင် လူတို့၏ မှားယွင်းသော ပယောဂများကြောင့် ဖြစ်ရပုံကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ယခုတဖန် ကမ္ဘာ့ပညာရှင်များက အထူးအလေးပေးပြောကြား သတိပေးနေသော ကမ္ဘာ့ရေချိုကန်ကြီး (၃) ကန်မှာ တိုက်ကြီး (၃) တိုက်တွင် တည်ရှိသည့်အနက် ကျနော်တို့နိုင်ငံမှ “အင်းလေးကန်ကြီး” လည်း ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် ညောင်ရွှေမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး ဧရိယာအကျယ်စုစုပေါင်း (၁၁၆) … Read more
စစ်ကိုင်း တိပိဋက ဆရာတော်က ကလေးဘဝတုန်းက သံချောင်းနဲ့ ခြစ်ပြီး ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ကုသိုလ်ရှင်ကျောက်စာကို ဘာကြောင့် ပြန်ပြင်ခိုင်းတာလဲ?
February 11, 2022 by daddy
အဲဒါလေးကိုလေ ခဲလေးသေသေချာချာပြန်သွင်းပြီးတော့, ငါ ကလေးဘဝတုန်းက သံချောင်းလေးနဲ့ ခြစ်ပြီးတော့.. ,အဓိကအားဖြင့် ဒေါ်တင့် ဒေါ်ရွှေ သား မောင်ဘတင် ဆိုတဲ့နေရာလေးလေ, အဲဒါလေးကြည့်လိုက်, ငါ ပြင်မယ် ပြင်မယ် နဲ့ မပြင်ဖြစ်တာ.. ဆရာတော်ဘုရားက စာသင်သား ကလေးဘဝတုန်းက သံချောင်းနဲ့ ခြစ်ပြီး ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ကုသိုလ်ရှင်ကျောက်စာကို ဘာကြောင့် ပြန်ပြင်ခိုင်းတာလဲ? သံဃိကပစ္စည်းဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဘုန်းကြီးက ဒီပါဠိတွေ နှလုံးသွင်းမိနေမှာပါပဲ။ (သံဃဿ ဝါ ဂဏဿ ဝါ သန္တကေ လာဘေ ပုဂ္ဂလိကပရိဘောဂံ ဝိယ ပရိဘုဉ္ဇိတွာ ယက္ခော ဝါ ပေတော ဝါ မဟာအဇဂေရာ ဝါ ဟုတြာ နိဗ္ဗတ္တတိ။) (အဋ္ဌသာလိနီအဋ္ဌကထာ) သံဃာပိုင်ပစ္စည်း/ ဂိုဏ်းပိုင်းပစ္စည်းတွေကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်လို လုပ်ချင်သလို လုပ်မရဘူး။ လုပ်ရင် … Read more
VPN သုံးရင် ဒီအချက်တွေကို မဖြစ်မနေသိထားပါ
VPN သုံးရင် ဒီအချက်တွေကို မဖြစ်မနေသိထားပါ မြန်မာမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် ဖေ့စ်ဘုတ်လူမှုကွန်ရက်ကို ပိတ်ဆို့မှုခံထားရပြီး VPN လို့ခေါ်တဲ့ Virtual Private Network (သီးသန့်ကွန်ရက်တု) စနစ်တွေကို သုံးနေရတယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို သင်မဖြစ်မနေ သတိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းပြီ ဒီတော့ ကျနော်တို့ ဘာတွေဖြစ်မလဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်- ၁) VPN သုံးတာကြောင့် အင်တာနက်သုံးစွဲမှု နှေးကွေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် bandwidth တွေကို ကန့်သတ်ခံရပြီး မိမိကိုယ်ပိုင်ထဲက ပိုနေတာတွေကို ပြန်ရောင်းစားတာ ခံရနိုင်ပါတယ်။ ၂) VPN ဆာဗာတွေက မိမိတို့ အသုံးပြုနေတာတွေကို ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေသုံးစွဲနေတယ်၊ ဘာတွေပို့နေတယ်၊ ဘယ်သူနဲ့ ဆက်သွယ်နေတယ် ဆိုတာမျိုးတွေပါ။ ၃) Vpn သုံးထားရင် ဖေ့စ်ဘုတ်က လွှဲလို့ ကျန်တဲ့ app … Read more
ဆံပင်အဖျားနှစ်ခွဖြစ်တာကို မိန်းကလေးတိုင်း ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ ဆံပင်အဖျားနှစ်ခွတွေက သင့်ဆံသားကို ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းပြီး ရှုပ်ပွစေတဲ့အပြင် ဆံပင်သန်စွမ်းတာကိုလည်း ရပ်တန့်စေပါတယ်။ အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တဲ့ ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေးတွေက ဆံပင်အဖျားနှစ်ခွဖြစ်ပြီး ပျက်စီးတာကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆံပင်အဖျားနှစ်ခွဖြစ်တာကို သက်သာသွားစေနိုင်ဖို့အတွက် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းတချို့နဲ့ လုပ်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်နဲ့ သံလွင်ဆီ ဆံပင်ပေါင်းတင်နည်း သံလွင်ဆီက fatty acid ပါဝင်ပြီး ဆံသားရဲ့အစိုဓာတ်ကို ထိန်းပေးကာ ဆံပင်ပျက်စီးတာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်ကတော့ ဉီးရေပြားက ဆဲလ်အသေတွေကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့ လက်တစ်အက်ဆစ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဉီးရေပြားကျန်းမာမှ ကျန်းမာတဲ့ဆံသားကို ပေးစွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ သံလွင်ဆီ (စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း) ကို ဒိန်ချဉ်ခွက်တစ်ဝက်နဲ့ ရောစပ်ပြီး သင့်ဆံသားမှာ လိမ်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် မိနစ် ၂၀ … Read more
ကော့ကရိတ်ကဆရာမလေးတွေပါ ကျောင်းဖွင့်ရင်ကျောင်းသားလေးတွေကိုပေးဖို့Maskများစွာကိုချုပ်နေတာပါတဲ့… ဘယ်သူမွေးမွေးငါ့ကလေးဟု ပညာလည်းပေးMaskလည်းဝေမည် မြေဖြူတစ်ချောင်းစာတစ်ကြောင်းဖြင့် ပညာအမွေပေးလေသူ ကျေးဇူးအနန္တဆပ်မဝသောဆရာအပေါင်းအားဦးညွတ်ပါ၏။ Umyit Oo ေကာ့ကရိတ္ကဆရာမေလးေတြပါ ေက်ာင္းဖြင့္ရင္ေက်ာင္းသားေလးေတြကိုေပးဖို႔Maskမ်ားစြာကိုခ်ဳပ္ေနတာပါတဲ့… ဘယ္သူေမြးေမြးငါ့ကေလးဟု ပညာလည္းေပးMaskလည္းေဝမည္ ေျမျဖဴတစ္ေခ်ာင္းစာတစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ပညာအေမြေပးေလသူ ေက်းဇူးအနႏၲဆပ္မဝေသာဆရာအေပါင္းအားဦးၫြတ္ပါ၏။ Umyit Oo
Categories facebook ပေါ်မှ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ Tags 26